Ikhabhathi yelog yabucala kwiFama yoWindswept
Delano, Tennessee, United States
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLaura
Ukuba ujonge amava okubaleka kunye nentaba entle ngasemva, yiyo le. Ikhabhinethi yethu ibekwe kwi-300+ yeehektare zabucala zomhlaba weenkomo kunye nemithi, ejongene nebala eliqengqelekayo kunye neeNtaba zeBlue Ridge. Kwi-adventure ekufutshane, zama ukukhwela amanzi amhlophe akumgangatho wehlabathi kuMlambo i-Ocoee. Okanye kuhambo oluzolileyo, zama ukuloba ngeempukane okanye ukutyhubhuza phantsi koMlambo iHiwassee. Ipropathi ilingana ne-Knoxville kunye ne-Chattanooga ukuba ungathanda ukongeza isuntswana lobomi besixeko kutyelelo lwakho.
Ngaphakathi kwekhabhathi, uyakonwabela ukupheka kwikhitshi elisandula ukulungiswa kwaye uzisonge kwindawo enkulu yamatye enencwadi elungileyo okanye imuvi oyithandayo. I-master bedroom suite entsha iyahambelana nesitulo esinamavili. Kukho izitulo ezishukumayo kwiveranda ukuze ukwazi ukubukela ukutshona kwelanga kutshintsha umbala weentaba.
4.99 ·Izimvo eziyi-84
4.99 out of 5 stars from 84 reviews
4.99 · Izimvo eziyi-84
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi84
Ifama yethu isemaphandleni nto leyo ethetha ukuba uyakonwabela ukurhoxa okuthe cwaka. Kukho imakethi yeMennonite kumgama oziikhilomitha ezimbalwa (evulekileyo ka-Epreli-Novemba) yemveliso entsha kunye neempahla ezibhakiweyo. I-Etowah yeyona dolophu ikufutshane, kumgama oziikhilomitha ezintandathu ezilula, apho uya kufumana ukutya, izikhululo zerhasi, iivenkile ezininzi zasekhaya ezibandakanya iimpahla ezinkulu, kunye neeresityu.
Umbuki zindwendwe ngu- Laura
Abanini bezakhiwo bakwisiza kwaye bafumaneka ngefowuni okanye ngetekisi.